Imibuzo Ebuzwa Ngokujwayelekile Nge-Platform ye-AutoChartist Pattern Identification Platform | Ibhulogi ye-FXCC
I-Sep 24 • I-Forex Software neSistimu, Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko • Ukubuka kwe-17085 • 3 Amazwana Emibuthanweni Ebuzwa Ngokujwayelekile Nge-Platform ye-AutoChartist Pattern Identification Platform
Uma ungakasebenzisi i-platform ye-AutoChartist, ulahlekelwa ithuba elingenakulinganiswa lokuba umthengisi ongcono. Le platform yesikhangiso sephethini ihlola amanani ezinkokhelo amahora angu-24 ngosuku ukubuka amaphethini athuthukayo abonisa ukuhweba okungenzuzo. Ingosi Yokukhomba Yesikhungo Esiyinhloko se-Central Pattern yasungulwa okokuqala ku-2004 ukudayisa amanani ase-US ngosuku lwangaphakathi lwe-intraday kodwa manje isetshenziselwa zonke izimakethe zezimali, kufaka phakathi izimakethe ze-forex nezokuthengiswa kwempahla.
Isiteji sisebenza kanjani?
Isiteji sibonisa amaphethini abonakalayo futhi agcwalisiwe ngezinketho ezintathu zokuhlaziywa kwezobuchwepheshe, kufaka phakathi amaphethini avamile amashadi, amaphethini we-Fibonacci namanki ayisihluthulelo, usebenzisa ukunikezwa kwedatha kusuka kumininingwane ephakathi kwamanani. Uma iphethini yeshadi litholakala, umthengisi unikezwa ngezixwayiso ezibonakalayo neziboniswa ngesikhathi esiza kuwebhusayithi. Isofthiwe isekela zonke izinhlobo zamashadi amakhulu, kufaka phakathi amakhandlela namashadi ebha. Ungaphinda futhi ubuyekeze amaphethini weshadi ukuze unqume ukuthi ziyasebenza kangakanani.
Izixwayiso zephethini zeshadi zihlanganiswa ngethuluzi le-PowerStats elihlinzeka ngolwazi olunjengezilinganiso eziphezulu nokulindelwe kwentengo phezu kwamafomethi ahlukene ahlukene kanye nokunyakaza kwamapayipi okujwayelekile. Itholakala ngezilimi ze-11, kufaka phakathi isi-Mandarin nesiRussia.
Ngingayisebenzisa yini isofthiwe nge-platform ye-MetaTrader 4?
I-plug-in isiyatholakala manje evumela ukuthi abathengisi bakwazi ukufinyelela kuzo zonke izici zesofthiwe nge-MT4. Uma i-plug-in ifakiwe, abathengisi bangakwazi ukuvula i-AutoChartist kusuka ku-MetaTrader 4 ngaphandle kokungena ngemvume kwipulatifomu futhi. Ungathengisa ngokuqondile emashadi, okuvumela ukuba usebenzise ithuba lokuhweba ngendlela efike ngesikhathi.
Kubiza malini i-AutoChartist?
Isiteji sitholakala ngokubhaliselwe, ngezinga elibekwe njalo ngenyanga, inyanga ezintathu nezinyanga eziyisithupha. Ungathola amanani wabathengisi ngabanye kusayithi. Ungase futhi usebenzise isilingo samaviki amabili samahhala ngokubhalisela kusayithi. Noma kunjalo, isiteji singase sitholakale ukusebenzisa mahhala uma unayo i-akhawunti nomunye wabathengisi babo abalingani. Ungangena ngemvume mahhala ngokuchofoza isixhumanisi sakho somthengisi.
Ingabe isayithi linikeza izifundiso nezinye izinsiza zemfundo?
Ungabuka ama-webinar ngezihloko ezinjengokuthi ungaqala kanjani nge-platform, ukuthi ungathengisa kanjani ngamaphethini weshadi nokuthi ungasebenzisa kanjani amandla we-PowerStats. Eziningi zalezi webinars ziyatholakala ku-YouTube.
Ngisanda kuqala njengomthengisi wemali, i-AutoChartist kimi?
Ipulatifomu ilungele ukuqala abahwebi, ngoba ivumela ukuba bahwebe ngaphandle kokujwayele amaphethini ahlukene wehadi. Konke okumele ukwenze ukulinda izaziso zokuhweba kusuka kudeshibhodi.
Ngisekuhwebeni iminyaka ethile manje. Ngiziphi izinzuzo engingazithola ngokusebenzisa ipulatifomu?
Ngaphandle kokuxwayiswa ngokuzenzekelayo uma amafomu wephethini ekhombisa ithuba lokuhweba, i-AutoChartist isusa umzwelo kusuka enkambisweni yokuhweba, ekulondolozeni ekulahlekelweni kokuhweba uma uhanjiswa ngukuhaha noma ukwesaba. Amathuba okuhweba nawo anikezwe amaphuzu wekhwalithi ukuze ukwazi ukunquma uma ufuna ukusebenzisa inzuzo ethile yokuhweba.
« Iqiniso mayelana neSistimu YokuThengiswa Kwezinga eliphezulu neMargin ku-Retail Forex Kwembulwe Amathiphu kanye Nezindlela Zokuphathwa Kwezimali Ze-Forex »
Izinkomba Eziphezulu ze-Forex nokuthi Zisho ukuthini